မြစ်ဆုံ: မိခင်ကြီး ဒေါ်စု
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို.ပေး၍ ဒီပို.စ်လေးကို တင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းစာရေးသူကို ကျနော်မသိ၍ မဖော်ပြနိုင်ခဲ.ခြင်းအပေါ် နားလည်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ကျနော် နားထောင်ခဲ.ဘူးသည်. သီချင်းထည်းက လို " ငါ.တို. မြန်မာပြည် မိဘတိုင်းကကွယ် ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းတွေ မွေးရမည် " တဲ. သီချင်းထည်းကအတိုင်းသာ ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော် ။ ဗိုလ်ချုပ်လို ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်သည်
သမိုင်းတွင် နောက်တစ်ယောက် ရှိဖို.ရာမလွယ်ကူပေ။ မိဘတိုင်းက တော. သားကောင်းရတနာတွေဘဲ ဖြစ်စေချင်ကြတာတော.အမုန်ပင်။ ယနေ.ကျနော်တို. မြန်မာလူငယ်အားလုံးကသာ ဗိုလ်ချုပ်လို ကိုယ်ကျိုးစွန်. အနစ်နာခံ တိုင်းပြည်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို.မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထိပ်တန်းနိုင်ငံများနှင်.တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရင်ဘောင်မတန်းနိုင်ဘူးလို. မပြောနိုင်ပါ။
Posted by မောင်မောင် at 18:37